Engine Overheat ပြဿနာ ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲ ?
Heavy machinery ဘဲဖြစ်​ဖြစ်​ Agriculture machinery ဘဲဖြစ်​ဖြစ်​ Automobile ဘဲဖြစ်​ဖြစ်​ Over heat troubleshooting က အတူတူဘဲ..... အဲ့​တော့ Heat Transfer(အပူ​တွေကူး​ပြောင်းပုံ) ၃ မျိုးရှိတယ်​။
ဥပမာ - ဖ​ယောင်းတိုင်​ မီး နား စတိးဇွန်းထား လက်​ကိုင်​ ကပူလာတာမျိုး ကို ​လျောက်​ကူးခြင်းလို့​ခေါ်တယ်​
​ရေ​နွေးအိုး ထဲက ​ရေ​နွေးပူလာတာကို စီးကူးခြင်း လို့ မှတ်​ပါ။ မီဖိုနား မီးလုံကြည့် အ​နွေးဓာတ်​ရတာ ဖြာကူးခြင်း ဆိုပါ​တော့... အထူးသဖြင့် Diesel Engine ကို တနည်းအားဖြင့် Compression Ignition လို့​ခေါ်တယ်​။
AGTI second year ,mechanical internal combustion engine module မှာ​လေ့လာနိုင်​တယ်​။ Diesel engine က ဖိအား၊ အပူ ၊ ထုထည်​ အချိုး​တွေက​နေ ဆီဖြန်းပေါက်​ကွဲ ​စေတဲ့ အတွက်​ Gasoline engine ထက်​အပူပိုထုတ်​တယ်​။
အဲဒီအပူ​တွေကို ဘယ်​လို ဖယ်​ရှားမလဲ ? (၂)နည်းရှိတယ်​....
၁။ water နဲ့ ဖယ်​မယ်​။
၂။ Air နဲ့ဖယ်​မယ်​။
Air က​တော့ ရှင်းတယ်​။ Engine ပန်​ကာ က​နေ ​လေ မှုတ်​မယ်​၊ စုတ်​မယ်​။ Radiator ကိုအ​အေးခံမယ်​။ Dozer engine ဆိုရင်​ မှုတ်​တဲ့စနစ်​ကိုသုံးတယ်​။ Dry type ​တွေဆိုရင်​ ​ရေမပါဘဲ ​Air တစ်​မျိုးတည်း အ​အေးခံတယ်​။
ဥပမာ ဆိုင်​ကယ်​ engine ကိုကြည့်...
Water က တနည်းအားဖြင့် coolent ဆိုပါ​တော သူက​တော့ အင်​ဂျင်​ရဲ့ အတွင်းဘက်​ ​ရေလမ်း​ကြောင်း​တွေ အတိုင်းသွားပြီး အပူ​တွေသယ်​လာတယ်​ Thermo start ဖြတ်​ပြီး Radiator မှာ​လေမှုတ်​အ​အေးခံတယ်​။ Thermo start အ​ကြောင်းတော့ ​ပေရှည်​​နေမှာစိုးလို့ ​နောက်​မှ ပြောပြ​ပေးမယ်​။
​နောက်​တစ်​ခု engine oil ကလည်း Cooling system ကို support လုပ်​​သေးတယ်​။ အဲ့​တော့ heat တက်​ပြီဆိုရင်​
၂။ပန်​ကာ ဒလက်​​တွေ ကြိုး​နေလား
၃။water pump ပျက်​​နေလား။
၄။ coolent မသုံးမိလို့​ရေဂျိုး​တွေပိတ်​​နေလား။
၅။ ​ရေ level နည်းနေလား။
၉။ thermo start မ​ကောင်းလို့လား
၁၀။ မီး timing မြှင့်ထားမိလို့လား
၁၁။ gasket ​ပေါက်​သွားလို့လား
၁၂။ engine oil နည်းနေလို့လား
Credit : Myint Thein Aung
Crown Kubora Myanmar Service Centre